February 25, 2021 - Babal Khabar
Feb252021 by EditorNo Comments
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले ‘तिमी बच्चा छौ बुझेर आउ’ भनेर थर्काएर, प्रश्न सोध्न पनि नदिएपछि चुप लागे ज्ञानेन्द्र (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक अभियान संचालन गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री हृदयस त्रिपाठीले थर्काएका छन् । उनको बोल्ने र आरोप लगाउने शैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीले थर्काएका हुन् । स्वास्थय क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट लिएर मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको ज्ञानेन्द्र शाही र उनको समुहबीच मन्त्रीको विवाद समेत भएको छ । शाहीले मन्त्रीसंग कुरा गर्दा उ त्ते जनापूर्ण तरिकाले बोल्न थालेपछि मन्त्रीले पनि उनलाई रोक्ने कोशिष गरेका थिए । उनले आफु पनि भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्त लिएर मन्त्रालयमा रहेका कारण त्यसमा आफु गम्भिर भएको बताएका थिए । उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता छानविन र अनुसन्धान गर्ने निकाय भएकाले त्यसैवाट अनुसन्धान गर्ने पनि बताएका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहीको समुहले मुलुकका विभिन्न स्वास्थ्य संस
लोकतन्त्र रहेसम्म कसैले पनि पाँच वर्षसम्म संसद् भङ्ग गर्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव
धनुषा, १३ फागुन । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्र रक्षा गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि अदालत र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति धनुषाले जनकपुरमा आज आयोजना गरेको महेन्द्रनारायण निधिको ९९औँ जन्मजयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो, “संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान मजबुत बनाएको छ । अब लोकतन्त्र रहेसम्म कसैले पनि पाँच वर्षसम्म संसद् भङ्ग गर्न सक्दैन । म संविधानलाई बचाउने अदालतलाई धन्यवाद तथा फैसलाको लागि सम्मान गर्न चाहन्छु । डा. यादवले अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेलाई खुशी दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयतामा विश्वास गर्ने, समावेशितामा विश्वास गर्ने
नैतिकता छ भने आफैंले भंग गरेको संसदमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ।
काठमाडाैं : प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको कुरा गरेका भन्दै भंग गरेको संसदमा प्रधानमन्त्री ओली कसरी जान्छन् भनी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलले प्रश्न गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बिहीबार अपराह्न बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता पाैडेलले सर्वोच्च अदालतले देशलाई र संसदीय प्रणालीलाई ठूलो संकटबाट बचाएको पनि बताए। संसदीय प्रक्रिया सुरु नभएकाले नेपाली कांग्रेसले गर्ने भूमिका अहिले केही पनि नभएको उनको भनाइ थियो। नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले कांग्रेससँगको सहकार्य खोजेका छन् नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, 'प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म कांग्रेसले केही गर्दैन। छोरो नजन्मिकन कन्दनी बाट्ने त कुरा भएन नि।'
बास्तोला मृत्यु प्रकरण्मा साथी जेल चलान, होटल सञ्चालक धरौटीमा छुटे
१३ फागुन, विराटनर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–५ का प्रवीण बास्तोलाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका दुईमध्ये एकजनालाई जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । हत्या आरोपमा बास्तोलाका साथी मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–१० का २९ वर्षीय निकेश शिवा भनिने मेहरमान दर्जीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । अर्का आरोपी उर्लाबारी–९ का ३४ वर्षीय कुमार राई भने तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । गत पुस ५ गते बास्तोलाको शंकास्पद अवस्थामा मृत्यु भएको थियो । आफन्त र स्थानीयबासीको आन्दोलनपछि मंगलबार प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । बिहीबार थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि एकजनालाई थुनामा र अर्का एकजनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेद
दाहाल-नेपालले सहकार्यको प्रस्ताव राख्‍नुभयो, हामीले तपाईंहरूको पार्टी कुन हो भनेर सोध्यौं’
babalkhabara / काठमाडौँ — नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका नेताहरुबीच पछिल्लो राजीनितिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । बिहीबार नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको हो । छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानका निम्ति नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताए । छलफलमा जसपा नेताहरुले दाहाल–नेपाल पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि महतोले बताए । आफूहरुले नेकपाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बताएको पनि वरिष्ठ नेता महतोले बताए । उनले भने, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरु राख्नुभयो । हामीले जिज्ञासा
२७४ सांसदहरु तीन महिनाको तलब एकैचोटी बुझ्दै , कत्ति सकिन्छ राज्यको ढुकुटी ?
काठमाडौं, १३ फागुन । ५ पुषमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तलबविहीन भएका प्रतिनिधिसा सांसद्हरुको तीन महिनाको तलब एकमुष्ठ पाउने भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनस्र्र्थापना गरेपछि सांसदहरुले ३ महिनाको तलब एकैचोटी पाउन लागेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीय सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य र तिनका पिएलाई पुस, माघ र फागुन महिना गरी तीन महिनाको तलब एकमुष्ट रूपमा पठाउने तयारी गरिएको छ । २५ फागुनअगावै तीन महिनाको तलब सांसदको खातामा पठाउने तयारी भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारी कर्मचारीसरह सांसदहरूको तलब २५ गते बैंक खातामा हाल्ने चलन रहेकाले पनि अब एकमुष्ट रुपमा तीन महिनाको तलब पठाउन लागिएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सांसदहरू तलबविहीन भएका थिए । सांसद्हरुले तलब कति पाउँदै छन् ? हाल सांसदहरूको तलब मासिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ। प्रमु
विराटनगर । नायक पल साहविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । आफूमाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट गरेको भन्दै चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुण प्रधानले पलविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका हुन् । प्रधानमको निवेदन परेपछि साहलाई शुक्रबार दिउँसो छलफलका लागि बोलाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । म्युजिक भिडियोको सुटिङका लागि धरान आएका साहको निर्देशनमा सहयोगी कृष्णप्रसाद जोसीले आफूमाथि आक्रमण गरेको प्रधानको दाबी छ । कुटपिट अघि दुव्यर्वहार गरेका साहले होटल ज्वाई खानामा रहेका बेला ८-१० जनाको टोली नै बोलाएको प्रधानले बताए । ‘कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्दा उनले दुव्र्यवहार गरे,’ प्रधानले भने, ‘त्यहीँबाट ८-१० जना केटाहरु बोलाए, उनीहरुले मलाई चिनेका कारण पछि हटे । साहको निर्देशनमा जोसीले आक्रमण गरे । आफूमाथि आक्रमण भएपछि उजुरी गरेको उनले ब
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बिहीबार भेटवार्ता,यस्तो भयो कुरो
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन्। भेटवार्तामा सर्वोच्चको फैसला, सरकारका काम कारबाही, प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने विषय, नेकपाको विवादलगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै संसद बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ।
ओली घर न घाट’ भएकै बेला भारतले चतुर कदम चाल्नुपर्छ’ : बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी
काठमाडौं, १३ फागुन । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नेता सुब्रमण्यन स्वामीले सर्वाेच्च अदालते प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन बदर गरेपछि ओली ‘घर न घाट’ भएकै अवस्थामा भारतले भारतले चतुर कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् ओली उनकै कदमका कारण अहिले ‘न घर न घाट’को अवस्थामा पुगेको हुँदा यहि बेला चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्न भारतले केहि सिक्नैपर्ने उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ओली उनकै कदमका कारण अहिले ‘न घर न घाट’को अवस्थामा पुगेको हुँदा यहि बेला चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्न भारतले केहीँ सिक्नैपर्छ । चिनियाँहरुले भूमिका बढाउने नै छन् त्यसैले सन्तुलन कायम राख्न भारतले निकै चतुर (मूर्खतापूर्ण होइन) राजनीतिक चाल चाल्नुपर्छ।’ यसरी सामजिक सञ्जाल ट्विटमार्फत् नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यदि यस्तो उपयुक्त समयम
सपनालाई धम्की दिने विनयजंगविरुद्ध साइबर अपराधको पनि मुद्दा
१३ फागुन, काठमाडौं । बेवारिसे शव जलाएर चर्चामा आएकी युवती सपना रोका मगरलाई धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका विनयजंग बस्नेतविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट सपनाको गोप्य तस्वीर राखेको पाइएपछि बस्नेतविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार विनयजंगको मोबाइलमा सपनाको केही गोप्य तस्वीरहरु भेटिएका छन् । यद्यपि, त्यो तस्वीर कसरी आयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रहरीले विनयको मोबाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पनि पठाएको छ । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख अशोक सिंहले भने घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गर्दै तस्वीरबारे बताएनन् । यद्यपि, साइबर अपराधमा मुद्दा अघि बढाइएको उनले स्वीकारे । भन्छन्, ‘बिहीबार